Global Voices teny Malagasy » Eto Amin’Izao Tontolo Izao, Na Tsara Pasipaoro Isika … Na Tsia · Global Voices teny Malagasy » Print
Eto Amin'Izao Tontolo Izao, Na Tsara Pasipaoro Isika … Na Tsia
Voadika ny 27 Oktobra 2016 14:18 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Afrika Atsimo, Frantsa, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana
Polisy manaisotra ny mpitsoa-ponenena ao Calais tamin'ny marsa 2016. CC BY-SA 4.0
Maneho tsy fankasitrahana  ny fandavan'i Frantsa tsy hamela ireo mpitsoa-ponenana hiditra ao amin'ny fireneny i Amélie Jacques, bilaogera frantsay efa niaina tao Paris sy ny tanàna itatra manodidina azy, avy eo tany Roma, dia tany Ouagadougou ary ankehitriny ao Soweto miaraka amin'i Anthony sy ny zanany. Toy izao no hita ao amin'ny bilaoginy “Ubuntu  Ny maha-olombelona iraisantsika “, ao amin'ny tambajotra Mondoblog :
Tokony ho afaka hiditra sy hanorim-ponenana ao Eoropa, ao Frantsa ireo mpifindra monina rehetra na mpitsoa-ponenana no iantsoana azy, na mpangataka fialokalofana, na mpifindra monina ara-toekarena, nandositra ny ady, sy ny fanenjehana na mitady ny ho avy. Tsy misy tohan-kevitra ara-maoraly handàvana ny olona hiditra na hijanona ao amin'ny firenena iray.
Mandà ny visa sy ny fialokalofana ho an'ireo lehilahy, vehivavy sy fianakaviana izay tonga hitady filaminana, asa, sns ny fireneko. Izaho anefa, tsy mbola nolavina hiampita ny sisintany mihitsy. Na hiala sasatra ny fianakaviana, na hianatra na hiasa mihitsy aza, manaraka fombafomba atao: mila antontan-taratasy maromaro indraindray , euro vitsivitsy, misy ihany koa ny fanaovana vakisiny, dia lasa izao! Afaka niditra sy nijanona herinandro vitsivitsy hatramin'ny taona maro tany Angletera, tazonia, Italia, Burkina Faso, ary Iran aho, ary amin'izao fotoana izao aty Afrika Atsimo …
Avy amin'inona ilay tsy fitoviana? Tsy hoe mendrika kokoa noho ireo lehilahy sy vehivavy hafa anefa ny Frantsay mba hanan-jo bebe kokoa na izany aza. Tombontsoa ny fananan-jo bebe kokoa ; ary amin'ity tranga ity, mifototra amin'ny fahaterahana ny tombontsoa, satria eto amin'ny tontolo misy antsika, misy ny teraka tsara pasipaoro… na tsia. Tsy azon'ny saina ekena ity tranga tsy fitovian-jo ity. Na isika mampitovy ny rehetra avy any ambany ka manakana ny olona rehetra tsy hivoaka amin'ny faritany nahaterahany, na omena ny olon-drehetra ny zo hifindra monina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/27/90764/
 Maneho tsy fankasitrahana: http://ubuntu.mondoblog.org/ouvrir-les-frontieres/